Waxay umuuqataa inaan yeelan doono qalin qalin Apple 3 bisha Abriil 20 | Waxaan ka socdaa mac
Abriil 20keeda a dhacdo cusub dalwaddii ka Apple Park, halkaas oo shirkadda Mareykanku ku soo bandhigi doonto qalab cusub. Waxa kaliya ee rasmiga ah ee waxaas oo dhan ku saabsan waa taariikhda maxaa yeelay aaladaha la soo bandhigi doono wali waa warar xan ah. Waxaa la qiyaasayaa in iPad Pro cusub uu ka soo gali doono albaabkiisa Laakiin kaligiis ma imaan doono. Waxay umuuqataa in saadaasheena la fulin karo waxaan sidoo kale arki doonaa qalin cusub oo Apple ah. Kii saddexaad oo faciisa ah.
Sida laga soo xigtay daadinta on Weibo, Apple waxay isu diyaarineysaa inay soo saarto jiil saddexaad oo Apple Pencil ah, oo sida muuqata qayb ka ah dhacdadii Abid Gugii la shubay.. Waa inaan fiiro gaar ah u leenahay waxa lagu sheegay koontada shabakadaas, maxaa yeelay munaasabado kale way guuleysteen. Waxaan horeyba uga helnay macluumaad kusaabsan jiilka saddexaad ee qalinka Apple. Xusuusnow in aan ka hadalnay qalab cusub laakiin midab dhalaalaya oo aan matte ahayn.
Hadda suuqa waxaan ku leenahay laba nooc oo qalin qalin ah. Jiilka ugu horeeya ee aan isleeyahay uguyaraan waxay duugoobi doonaan waqtiga jiilka seddexaad lasoo bandhigo. Qalabka qalinka ee 'Apple Pencil 2' waxaa loo isticmaali doonaa aalado aan ahayn pro iyo Midkani wuxuu la imaan doonaa qalin cusub oo Apple ah "gacanta hoosteeda."
Faahfaahinta waa yar yihiin, laakiin jiilka saddexaad ee Apple Pencil ayaa ka mid noqon kara qaar ka mid ah dareemayaal cusub oo kaliya la shaqeeya bandhigyada soo socda ee iPad Pro 2021, taas oo u oggolaan karta astaamo cusub ama saxnaan weyn oo qalinka dijitaalka ah. Mid ka mid ah astaamaha cusub ee muhiimka ah ee laga filayo iPad Pro 12,9-inch soo socda waa a bandhig miniLED, kaas oo bixiya heerar sare oo dhalaal iyo isbarbar dhiga.
Kiniiniga cusub xitaa wuu imaan karaa leh dekedda Thunderbolt, taas oo u oggolaan doonta adduun ballaadhan oo ka mid ah qalabyada isku habboon inay ku xirmaan dekedda USB-C iyo in qalinka cusub ee Apple uu ku xirmi karo iPad-ka sidaas. Inkasta oo nidaamka ku-dallaca induction ee hadda jira uu yahay mid cajiib ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Waxay umuuqataa inaan yeelan doono qalinka Apple 3 20 abriil XNUMX
Isticmaaluhu wuxuu ku darayaa gaarigiisa HomeKit oo si fog u xakameeyaa